Zvose izvi Spam - A Small Talk Ne Semalt
Indaneti yakazara nemashoko e spam anotsvaga mabhokisi einboxes ema e-mail akawanda. Mazhinji ema spam emails anotsamwisa, saka saka vanoda kubvisa kana kudzivira kuti vadzivise kusagadzikana kwavo kunopera kuti vashandise nguva nesimba remuti wekambani.
Munyaya ino, Michael Brown, uyo Semalt Mutariri weMutengi weMutengi, anotaura zvaanofungidzira pamusoro pe spam emails anonyanya kuchinja vashandisi vemamiriyoni pasi pose.
Chii chinonzi Spam Email?
Imeyili isina kubvunzwa iyo inodonha mubhokisi yebhokisi ye email inowanzoreva email ye spam. Tsanangudzo yakajeka ye email ye spam inosanganisira mapepa ehumwe mharidzo inotumirwa kuburikidza ne email kuti iedze kumanikidza vanhu vakataurirwa avo vasina kusarudza kuwana mharidzo kuti vaigamuchire zvakadaro. Iko email ye spam inonyanya inosanganisira zvinoshambadzira zvekutengeserana - reinigungsfirma bülach.
Mimwe mirayiridzo isingabvunzi haifaniri kupera kuti ive spam emails nokuti hainyengeri bhokisi rekukanda. Muenzaniso wemameri aya asina kukumbirwa unosanganisira munhu akare-kurasikirwa uyo anokwira rimwe zuva kuti ati hello nge email angava email ye spam isingakonzerereki.
Nei Ichinzi Spam?
Izwi rokuti spam rinowanzofungidzirwa kuti rinobva pakugamuchirwa kusingaperi kwezwi spam kubva kuimba rwiyo" Spam spam spam spam, spam spam spam spam, rakanaka spam, inoshamisa spam, "naMonty Nzira iyo mazwi ayo asina maturo.Asi zvakadaro, vamwe vanhu vanobatanidza izwi rokuti spam email neYunivhesiti yeSouth California iyo yakafananidza email scam kune nyama yaSpam Hakuna munhu aifarira nyama spam.Haiwe anodya nyama spam, uye nguva dzose inosundirwa kunze apo iyo tafura pasinei nekuve inonaka pane dzimwe nguva se1% ye spam emails iyo inotora bhokisi rekiki.
Mitemo ye spam inogona kutyisa bhokisi rekupositora nekuda kwekubhadhara kunoitwa pawebsite kana email yekambani yakakosha kuti iite kuti zvinyorwa zvigadziriswe. Kuburikidza nekubhadharisa, mudzidzi anogamuchira graymail iyo inowanzoita email spam inouya nekuda kwekukoka kubva kumushandisi.
Inoparadzanisa Dambudziko Here?
Nhamba dzemashoko emajeri asina kukanganisa anowanzove anoratidza kuti spam emails anokonzera matambudziko mazhinji kumunhu. Kunze kwokuparadzanisa nguva yomushandisi nokuti nguva dzose vanoda kutarisirwa pavanotora bhokisi rekudisa, maaimusi asina kudiwa vanodya zvakawanda zvewendewidth. Pasinei nekubhadhara zvakanyanya kune zvakatumira kune anotumira, spam emails inogona kudhura kumunhu.
Nzira yekurega Spam
Kune zvakawanda zvakapindira zvinoshandiswa paIndaneti kurwisana nemameseji e-spam kubva pakusvika kwebhokisi rebhokisi re email. Vanhu vazhinji nemasangano vanozvitora sechinhu chakakomba chekudzorera kusaisa mukutumira kwavo. Zvisinei, kushayikwa kwemitemo yekutonga paIndaneti kunopa zviyero sezvibvumirano zvakakosha zvekubvisa dambudziko zvachose. Yakagadziriswa mitemo nemakambani eInternet akadai sokurega kuparadzanisa vanyori varo ndiyo nhanho yekuenda kuderedzwa kwezvakawanda.
Imwe nzira yakakurudzirwa yekudzivirira mitemo ye spam ndeyokusazvinyora kubva pakuvandudzwa kwemashoko kubva kumawebsite asingabatsiri zvakawanda kumushandisi. Mushandisi anogonawo kusarudza kubviswa uye kudzivisa zvisingadikanwi mishumo yakasanganiswa se spam.